TIKNOOLOJIGA BEERAHA STRAWBERRIES "MASHA": SHARAXAADDA KALA DUWAN, TALOOYIN KU SAABSAN ABUURISTA IYO DARYEELKA - STRAWBERRIES
Qeexida iyo sifooyinka kala duwan ee taranka "Masha"
Strawberry "Masha" wuxuu u koraa baadiyaha isku dhejisan ilaa 45 cm. Waxay leedahay caleemo waaweyn-cagaaran-cagaaran on petioles qaro weyn. Tan iyo markii ay koraan koritaanka, baadiyaha ma aha mid aad u ballaaran ee dhexroor. Midhaha "Masha" waa kuwo aad u ballaaran: dalagga ugu horreeya wuxuu keenaa berry oo culeyskiisu yahay 130 g, kan xigga wuxuu noqonayaa qiyaastii 100-110 g. Intaa waxaa dheer, nooca berry waxay leeyihiin qaab jilicsan oo xiiso leh, oo la mid ah taageere ku yaal daboolka, inkastoo qaabka dalagga labaad uu noqon doono mid joogto ah oo siman. Berry strawberry ugu horreeya "Masha", sida lagu sheegay sharaxaadda noocyo kala duwan, waxay noqon kartaa wax la yaab leh, laakiin tani waxay dhacdaa dhif. Marka bislaado, waxay yihiin guduud mugdi ah oo midab leh, oo aan lahayn godhood, fareeshka, casiir leh dhadhan macmacaan. Caarada strawberry waa cagaaran-caddaan (caanaha kala duwan ee saldhiga). Berry oo dhan waa la daboolay miraha cad iyo jaalaha ah, wax yarna u guntan jidhka.
Nasiib darro, ma jiraan wax ku habboon adduunkani, iyo strawberry "Masha", marka laga reebo mudnaanta ay leedahay, waxay leedahay cillado. Marka ugu horeysa, faa'iido darrada waxaa ka mid ah dareenka xooggan ee qorraxda (caleemaha waxaa lagu daboolaa meelo gubasho), iyo, si aad ah, ku filan, faa'iido darrada waa mugga weyn ee miro, sababtoo ah berrito waa weyn, tirada yar.
Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka qumman ee kala duwan yihiin hardiness jiilaalka of strawberry "Masha", dhalidda wanaagsan, macaan, casiir leh, nooca berry iyo difaaca sare ee cudurka. Intaa waxaa dheer, "Masha" waxay u dulqaataa gaadiidka. Sidoo kale, faa'iidooyinka waxaa ka mid ah dhalmo sahlan iyo tilmaam wanaagsan oo ah shuban shaarib ah.
Doorashada geedo strawberry caafimaad leh marka aad iibsaneyso
Caleemo geedo cagaar ah oo caafimaad qaba waa monochromatic, casiir leh-cagaaran oo leh dusha dhalaalaya dhinaca sare ee saxanka. Caleenta taabashada waa feejignaanta iyo fareeshka, asliga ah waa mid adag oo xoog badan. Geesku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 7 mm qaro weyn, sida fruiting strawberry ku xiran tahay. In geedo ku yaal dooxada, nidaamka xididku wuxuu hayaa meel dhan ee weelka, halka dhirta leh xididdada furan dhererkoodu waa inay ahaadaan ugu yaraan toddobo mitir.
Waxaa ugu wanaagsan inaad iibsato geedo varietal ee xanaanada, tan iyo markii iibsashada gacmuhu ma ku siin doonaa damaanad qaadashada si sax ah nooca aad rabto.
Doorashada meel loogu talagalay strawberries
"Masha" waxaa lagu beeray goob dabaq ah, inkastoo doorasho yaryar loo tixgelinayo doorasho sax ah. Meesha ugu fiican waxay noqon doontaa dhulka ku yaal dhinaca galbeed ee goobta. Iskudhicii Oblique iyo meelaha hoose ee qoyaanku istaagi karaan strawberries waa ka hortag. Sidoo kale ma'aha lagama maarmaan in la helo koonfurta, maadaama Masha uu aad u xasaasi u yahay qorraxda, sidoo kale, meelaha koonfurta, barafku si dhakhso ah ayuu u dhalaalayaa, isagoo ka soo baxa duurka u nugul. Ka hor inta beeritaanka strawberries, iska hubi in biyaha dhulka ku yaal aagga la doortay waa qoto dheer, ugu yaraan 80 cm dusha sare. Cagaarshowgu wuxuu u egyahay carrada iftiinka iyo dabacsan, laakiin dhoobada iyo boodhka bada ah ayaa ugu haboon.
Ma taqaanaa? Aqoonyahanka Ingiriisiga ah Patrick Holford, oo wax ka bartay iskudhafkii strawberries, wuxuu sameeyay sahan xiiso leh. Cagaarshowgu waxa loo tixgelin karaa aphrodisiac, tan iyo qadar badan oo zinc ah ee ka kooban qaybtiisa markii la cunay waxay kordhisaa rabitaanka galmada labadaba.
Laba toddobaad ka hor intaan la beeriin, waxay diyaariyaan carrada: waxay qodayaan, caleemaha cawska iyo qaadista 10 kg ee humus iyo 5 kg oo ciid ah halkii 1 m². Si loo ilaaliyo dhirta ka soo duulaan cayayaanka, ka hor inta beerto, ciidda waxaa sidoo kale lagu daaweeyaa sunta cayayaanka.
Beerto geedo strawberry
Soo saarista waxaa la qabtaa dhamaadka bisha May ama bilowgii bisha Agoosto, waxaana wanaagsan in la doorto maalinti murugo leh. Wixii dhirta, qoday godadka leh qoto dheer oo ah 20 cm, iyaga oo meel dhigaya fogaan ah 40 cm midba midka kale. Ku shub nus litir oo biyo ah ceel kasta, meel dhigo seedling si ay asaasiga u ahaadaan dusha sare, oo ku saydhaa carrada. Taas ka dib, dib loo waraabiyo iyo mulch (dhadday).
Waa muhiim! Waxaa lagu talinayaa in laga tago masaafada u dhexeysa duurka iyo safafka, haddii kale dhirta ayaa faragelin doona midba midka kale si uu u helo nafaqo wanaagsan oo ka soo baxa ciidda.
Daryeelka wanaagsan - fure u ah goosashada wanaagsan
Daaweynta strawberries "Masha" maaha mid adag: waraabinta, quudinta, dabacsanaan, jaridda dhirta iyo mulching waa dhamaanteed dhirta u baahan tahay.
Ka waraabinta strawberries subaxdii, adiga oo isticmaalaya biyaha heerkulka qolka. Per 1 m² waxay ku shubtay ilaa 12 litir oo biyo ah. Xilliga xagaaga, waxay kuxirantahay roobab, waa inay jirtaa laba iyo toban ilaa shan iyo toban keli ah. Waxa kale oo muhiim ah in waraabiyo dhirta ka dib miro-khudradda, sababtoo ah inta lagu guda jiro muddadan tani waxay ku jirtaa sanadka soo socda. Ka dib markii la waraabiyo, waxaad u baahan tahay inaad dabacdo carrada oo ka nadiifi haramaha, iyo haddii xididdada strawberry ay u dhashay, ka dibna waxay u baahan yihiin in ay kufaan. In cimilada kulul iyo strawberries qorraxda qorraxdu waxay u baahan tahay pritenyat si looga ilaaliyo gubashada.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah sawirada naxdinta leh ee kacaanka Faransiiska iyo qof firfircoon maxkamadda Napoleon, Madame Talien, ayaa jeclaa in la qaato barkada strawberries, iyada oo aan sabab la'aan loo tixgelineynin in nidaamyada noocaas ah ay sii daayaan maqaarka, dhalaalaya iyo shucaac.
Dharka ugu sareeya ayaa si gaar ah lagama maarmaanka u ah dhirta inta lagu jiro xilliga koritaanka firfircoon, haddii kale strawberry "Masha" by waqtiga Bisaylkiisa ma fili doonaan badan oo ah berry. Inta lagu jiro muuqaalka kore ee caleemaha xooggan ee ugu horeeya ee strawberries bacrimiyey leh xal of nitroammofoski, heerka of 1 tbsp. qaadada ilaa 10 litir oo biyo ah. Ka dib markii midhaha la sameeyey, waxaa la quudin (hoos baadiyaha) leh isku dar ah ee amooniyam iyo potassium sulfate, qaaday in qaybo siman (1 qaado yar kasta). Ka dib markii ay fuliyaan berry sameeyo 2 tbsp. malqacadaha nalalka potassium, lagu qasi jiray 10 litir oo biyo ah ama 100 g ash (on 10 litir oo biyo ah). Marka la gaaro xilliga dayrta, bisha Sebtembar, strawberries waxaa la bacrimiyey daroogada "Kemira Autumn", 50 g oo kaas oo ku filan 1 m² of beerto (carrada waxaa lagu beeray inta u dhaxaysa saf).
Ka dib markii laga beerto dhirta dhalinyarada iyo waraabinta duurka qaangaarka, waa lagama maarmaan in la daboolo ciidda leh balka, kaas oo kaa caawin doona inaad ilaaliso qoyaanka iyo ilaalinta nidaamka xididka ka badan kuleylka. Inta lagu jiro muddada miraha, ciidda ka yar duurka waxaa la daboolayaa maqniin qallalan, tan iyo berry waaweyn oo dhulka ku hoos miisaanka miisaanka u gaar ah oo saameyn kara by kallana.
Daaweynta iyo ilaalinta cudurrada iyo cayayaanka
Strawberry "Masha" wuxuu leeyahay caabuq wanaagsan oo cudurku leeyahay, laakiin mararka qaarkood haddii aadan raacin xeerarka daryeelka, waxay ku xanuunsan kartaa xayrta budada ah waxayna saamayn kartaa cayayaanka. Si looga hortago tan, waxaad u baahan tahay inaad qaadato tallaabooyin amniga ah. First of dhan, fiiri wareegga dalagga. Kuwa ugu wanaagsan ee loogu talagalay strawberries waa karootada, toonta, dhir, radishes, peas, miro, lupins iyo galley.
Waa muhiim! Ma abuuri kartid strawberries aagga meesha ay ku koraan dalagyada iyo qajaarka. Afar sano kasta, meel loogu talagalay strawberries waxay u baahan tahay in la beddelo.
Tallaabooyinka ka hortaga cudurrada waxaa ka mid ah:
Nadiifinta aagga caleemaha iyo cagaarka, inta lagu jiro koritaanka iyo ka dib goosashada.
Waraabinta xakamaynta, sida qoyaan badan ayaa waxyeelleynaya strawberries.
Ka hor xilligii ubax iyo goosashada ka dib, qaado daaweynta ka hortag leh isku dar ah oo biyo ah (15 l) iyo Topaz (15 g), iyada oo lagu daro 30 g oo ah saabuun iyo naxaas sulfate.
Ka hortagga cayayaanka: ka dib goosashada, carbofos buufin (3 qaado oo ah diyaarinta 10 litir oo biyo diirran ah).
Guntinta strawberry budada ah
Dhirta cawska oo si dhakhso ah iyo tiro badan ayaa kor u qaadaya shaarib ah oo soo jiidanaya nafaqooyinka ka soo carrada. Si kor loogu qaado dhalidda qudaarta "Masha", xajmiga miraha iyo in laga fogaado cudurada sababtoo ah xajmiga duurka, waxay si joogto ah u jaraan boorashadooda.
Kala duwanaanta "Masha" waxaa loo tixgeliyaa inay tahay dhexdhexaad, taas oo macnaheedu yahay in strawberries u bislaadaan horraantii Juun. Bisaylku waa mid caadi ah, sidaas awgeed beergooyska lama daaho. Waxaa la fuliyaa maalintii iyo cimilada qalalan, tan iyo strawberries qoyan lama kaydin doono. Berry wuxuu bilaabaa inuu soo uruuriyo, ka dib marka uu sugo seddex maalmood ka dib casaan buuxa. Haddii gaadiidka la qorsheeyay, waxaa wanaagsan in horay loo qabto. Miraha waxaa lagu ururiyaa isla markiiba weelka ay ku kaydsan yihiin. Ka ilaalinta strawberries wakhti gaaban, dhawr maalmood oo keliya ee qaboojiyaha, sidaa daraadeed waxa loo baahan yahay in si degdeg ah loo shaqeeyo.
Goostay xilliga qaboobaha ee foomka macaanka, lagu xafiday sharoobada, strawberries qalajiyey iyo qalajiyey, qaab kasta oo aad u dhadhan fiican leh iyo caafimaad leh. Waxaad sidoo kale xakameyn kartaa, laakiin berry wuxuu nuugaa biyaha oo urta wax badan, sidaas darteed waxa fiican in la doorto xulasho kale oo bannaan.